Sida kulan badan mobile la heli karo, RPG ama door ciyaaro ayaa si isa soo taraysa oo caan ah, oo taas aawadeed kulan iyo aad u badan RPG lagu abuuray. Sidaa darteed, ay sabab u tahay kororka ay caan, users doonayaan in ay ogaadaan oo kulan waa kuwa ugu fiican ee uu u ciyaaro.
Sidaas liiska soo socda ayaa la cusboonaysiiyaa si ay u muujiyaan oo kulan RPG waxaa loo tixgeliyaa in ay 50 ugu sareeya, oo waxaa ka mid bilaash ah ama lacag u ciyaaro kulan ku saabsan qalabka Android.
Price: $ 1.21- $ 122.38 per item
Dhis koox rag dagaal. Hanato dhulka sida adiga iyo kooxda ah rag dagaal jinniyo kala duwan. Ururi xirfadahooda aasaaska ah si aad adiga iyo kooxda ka tirsan gargaartaan, sida aad ka qayb qaadato talaabo gameplay khiyaali this.
2. Final sheeko
Price: $ 2.33- $ 120.43 per item
Waxaa xun halis dhulka ah oo lagu magacaabo Fantasia. Isticmaalka waran halyeeyga ah Aesop in dib loo bilaabo si, oo u dirira si loo badbaadiyo Fantasia. Waxaa jira 100 marxaladaha in ay dhex maraan la combos cajiib ah oo saakay istiraatiiji ah. Waxa kale oo aad ka qaadan kartaa kaararka ganacsiga ee sheekooyin aad ugu jeceshahay.
3. Tubada Titan
Price: $1.70 - $85.85 boqolkiiba item
Dumiya dhaxeeya kooxo inuu keeno nabad inay dalka. Tubada inuu shaqaalayaal u kireeyo geesiyaal, weerar, waxna dili iyana in ay dhex maraan biimayn this. Waxaa jira 10 kaarto si aad u dhex maraan, iyadoo tartan aad u ku tartamaan. Si loo hagaajiyo hub aad waa in aad u yeeri 30 artifacts, iyo tan kaloo la shaqeeyaa awoodaha aad.
Price: $ 1.21- $ 124.69 per item
Diririna dawacooyinka iyo warthogs. Adduunyo waan la xumaantay hore dalwaddii iyo wuxuush in ay yihiin halyeeyga buuxiyeen. Foomka Koox ka mid ah xeryaha duurdoogta oo la shaqayn jiray oo tababar koox bahal in uu yahay kulul. Qayb ka mid ah dagaal Iska iyo ay qabsato in waqtiga dhabta ah.
Dagaallami 5. yaabin Future
Price: $ 3.39- $ 113.53 per item
Samee kooxda ee Avengers. Iyaga soo urursada oo ay ka jawaabaan cidhiidhi call a ka Nick cadho. Ka qaybqaado 3 3 ciyaaryahan dagaalo iyo kasban oo kordhiyey iyo lacagihii gaar ah kooxda. Ama waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si ay ula dagaalamaan ciyaaryahanka kaliya in lagu furo dharka cusub oo haddana goosta abaalmarin ah.
6. Taichi Eygan
Price: $ 1.23- $ 125.6
Noqo geesi runtan. Isticmaal dagaal saakay tallaabada in ay ku lug cararnay ah. Sida aad horumar iyada oo ciyaarta waxaad ka heli doontaa inaad dhisto oo aad PANDA si ay u noqdaan dagaalka kama dambaysta ah. Samee dagaalka gaar ah si ay god ka dhanka ah ciyaartoyda kale.
Price: $ 0.77 - $54.31
Dooro yaxaas iyo hub ka dibna ku biiro dagaalka ku jira. Waxaa jira shan xubno ka ah in ay isku dhaceen adduunka ah in uu yahay qurux badan, oo waxaad u baahan doontaa in aad sida ugu dhex by horjeeda dagaal, si aad si uu u noqdo Eebaha Pixelmons ah. Waxaad u baahan doontaa in ay bartaan sida loo xakameeyo mid kasta, si aad u abuurta kartaa xeelado dagaal in ay yihiin shakhsi aad si.
Tani waa door ka ciyaari adduunka dalwaddii. Saaxiibada Samee iyo qolalka in this pixel ciyaarta style tahay dhiso. Qayb ka mid ah bulshada Noqo iyo naftaada ku lug tartamada iyo hawlaha maalinlaha ah. Waxyaabaha Ganacsiga, chat in saaxiibo, joog adduunka kuu gaar ah oo aad la abuuro oo aad ku baran malaayiin dhalinyarada adduunka oo dhan.
Price: $ 1.02 - 41.06 $
Samaynta, Iyo La qorshee avatar u adduun dalwaddii 3D. Waxaad u baahan doontaa in ka badan 17 si ay u diiwaan kulankaan. Halkan waxa aad ku dhexgeli karto oo aad sameysatid saaxiibo iyo la kulanto dad cusub. Tani waa meel dalwaddii loogu talo galay dadka la taaban karin.
10. bahal Squad
Umuuruhu iyo dagaal aad xulka bahal. La kulan oo la diriri cadaawayaashiinna oo kala duwan jidka, sida aad u furid wuxuush kala duwan oo u safraan iyaga la marayo dalalkan oo kala duwan. Waxaa jira 500 oo wuxuush si ay u ururiyaan la waluba wuxuu lahaa sifooyin kala duwan.
11. Shimbiraha careysan Epic RPG
Price: $ 0.74 - $109.88
Tani waa shimbiraha cadhooday hubka. Waxaa sidoo kale jira koofiyadaha doqon, guys xun iyo sixir. Raadi naftaada in erayada Tacaddi hub Tacaddi iyo casriyaynta. Kulankaan ayaa sidoo kale waxaa ku jira characters funny in la gashan kartaa in dharka doqon ah oo hubka u fool xun. Sida adiga iyo saaxiibadaada baalal leh oo ah dagaal kasta oo kale sameeyaan.
12. kulmiya War
Price: $ 1.17 - $206.7
Kulan RPG Fantasy. Tartanto 30 million ama in ka badan ugu yeedhi ee dunida oo dhan. Dagaal saaxadda Sky ee khayraadka ah oo lagu magacaabo kiristaalo Mana Ma. Waxaa jira in ka badan 800 wuxuush u yeedho iyo aad inay la diriraan.
13. School of Herzegovina
Price: $ 4.30 - $88.94
Kor, tareenka iyo tartano aad masduulaagii. Noqo tababaraha masduulaagii kama dambaysta ah iyo kici soo baxay. Dooro masduulaagii u gaar ah oo u astaysto. Qoro dugsiga, taas oo kuu ogolaan doona inaad la tartamaan ardayda ka soo adduunka oo dhan.
14. League ah Malaa'igta - tuugo Fire
Price: $ 5.99- $ 120.15
Garab geesiyaal aad u jabiyaan ciidamada Devil ee la dagaallama. Baro falfalkaaga iyo ku dagaallami kulan in ay yihiin sir ah sida dagaalyahan geesi ah. Halyeey ka noqday hub aad u xoojinaya, iyo Sagna aad ciidan si ay Cadawgiinna dili karaan sida aad ku dagaallama, kuwaas oo kulan la dhehay. Ka qaybqaado dagaalladii Tacaddi iyo ciyaaro kulan multiplayer dadka kale ee laga yaabo in ka xoog badan aad.
Haddii aad rabto in aad disho si aad Tababaraha markaas ciyaarta waxa loogu talagalay adiga. Kulankaan ayaa waxa uu leeyahay shan siyaabood in ay dilaan aad Tababaraha kooxda, iyadoo dhiig badan oo xiiso leh iyo khiyaali. Go'aan diidani aad rabto iyo waxa ay dooran, ka dibna arki doonaa waxa dhaca.
16. Avengers The - baabbi'iyayaashii
La dagaallama Dhinaca horjeeda. Dagaal la Orcs, bililiqo baayacmushtariyaashii iyo meel dawacooyinku ay ku samee. Dagaallada yihiin breathtaking iyo qiraan aad xirfado kaa caawin doona inaad la hagaajiyo, oo sidoo kale lagu sheekeysto in ciyaartoyda kale ee waqtiga dhabta ah. Isgaarsiinta ciyaartoy kale oo waa kulankaan waxa oo dhan ku saabsan. Dhammaan wuxuush ee kulankaan waa mid gaar ah oo xiiso leh.
Samee koox oo dagaalka. Ka qaybqaado 150+ goobaha baaris iyo qabsadaan goobaha dagaalka ku jira. Waxaad awoodi doontaa in ay helaan in ka badan 160 kartida iyo xirfadaha gaarka ah, oo ka adkaadaan aad shaqooyinka macdanta iyo kalluumaysiga. Xitaa Waxaad dooran kartaa in ka badan 1200 oo alaabta, oo ay ku jiraan hub u siday iyo hub.
18. waxaad huwataa Heroes
Samee kaydsada ah geesiyaal iyo khalqiga sixir ah. Sagxad ah kaararka oo dhan waa u gaar ah oo waxaa aad u soo ururiyaan. Naftaada Waayaya dagaalka oo dunida ka mid ah geesiyaal lagu sharraxaa taas oo dahsoon iyo haybad. Taga oo tuurnimo iyo naftaada quusin in xujooyinka, tijaabooyin, dhaheen harya iyo si ka badan.
Price: $ 1.29 - $124.57
Adventure iyo ciyaarta istiraatiijiyad dagaal oo aad u qaadataa guud ahaan dalalkan oo baaxad weyn, oo sidaas daraaddeed baan idinka soo ururin karo ciidan badan oo dagaalyahan ugu weyn taariikhda ee. Qaado on horjeeda kale oo dagaal kula xoog badan dhakada Army sameeyo. Dagaal ee garoonka ayaa waxaa Ma oo loo arko haddii aad ka soo SMART kartaa mucaaradka, kuwaas oo dadka oo dunida ku baahsan.
20. kartoono lagu Dog Adduunka
Price: $ 1.23 - $125.83
Dooro eyga oo ku qaadan duullaankii ah oo ku saabsan waddooyinka magaalada. Waxaa jira doorasho ah in ay soo ugaarsadaan walxaha iyo sidoo kale waxaad dooran kartaa in eryan dadka, baabuurta iyo baabuurta. Waxaa jira 4 maps waaweyn in ay dhex maraan iyo 3 eyda eey oo kala duwan oo uu ka soo xusho.
Space ciyaarta dagaalka. Adkaan Galaxy, iyo hogaamiye aad mar walba rabay in aan. Samee Maraakiibta dagaalka iyo maraakiibta kale ee la sameeyo. Dagaalka galactic waxa uu u suurtogelin doontaa in aad ka ciyaaro koobabka waa todobaadle ah, oo aad u cusboonaynta kartaa raxan ah iyo kartidooda.
Price: $ 1.02 - $101.69
Iidle ciyaarta clicker style. Kulankaan ayaa laftiisa ka ciyaari doonaa, oo aad u baahan tahay inaad samayso waa go'aan ka gaarto waxa fasalka aad rabto in aad ka dibna ha ciyaarta kale yeelaan. Waxaad u abuuri aad geesiga iyo dagaalka uu yahay mid aan kala joogsi laheyn. Kulankaan ayaa weli u ciyaaro xitaa marka aad hurda.
23. bahalka Quest
Price: $ 1.32 - $33.38
Bilaash oo xayawaanka ka sixray ka xun. Dagaal la jirto xayawaanka ku barafka iyo xataa dhul bacaad Waxaad samayn kartaa. Si ay haatan ugu cadcadahay in ka badan kaa soo horjeeda aad u cusboonaynta kartaa qalabka adigoo buuxinaya balaadhan. Ururi artifacts iyo khasnado laga badiyay, sida aad la kulmi boqolaal caqabadaha, guulihii ku jira ciyaar iyo sirta iyo sidoo.
Ururi kuwaas oo la abuuray oo la jeclaysto. Bar tricks oo iyaga ka dib eegto. Samee aad avatar aad u gaarka ah, iyo sahamiyaan caalamka. Waxa jira qolal chat in kulankan si aad iskula xidhiidhi karaan dadka kale, iyo haddii aad sameysato akoon MovieStarPlanet aad xitaa la falgala saaxiibbadiis oo dhammu aad kuwa kale oo ay leeyihiin, kuwaas oo la yaab leh la abuuray oo weli cute.
25. Dugsiyada fowdo Online MMORPG
Caruurta ayaa xor u yihiin inay sameeyaan waxa ay doonayaan. Dhamaan macalimiinta ka tageen, waa maxay sababta? Maxaa yeelay, iyagu la cunay zombies ah. Waxaad astaysto dabeecadaada, iyo burburin dadka kaa soo horjeeda leh 30 ama in ka badan dagaal u dhaqaaqdo in aad qabto in aad qaadato waajihid. Dagaallada Mushaharka aad qabiil iyo xitaa iibsadaan guryo iyo tuuraan koox ka mid ah ama laba.
26. Pixel godxabsiga
Raadi godka ka alaabta. Soo ururi alaabta iyo isku day inaad hesho amulet ee Yendor. Waxaa sidoo kale jiri doona waxyaabaha ay u ururiyaan kuwaas oo aad u faa'iido badan, iyo soo fool ka fool u la abuuray oo kulul oo isku dayi doonaa in aad hab ay u istaagaan. Digtoonaada kulankaan idinku dili doonaa marar badan.
27. Guardian Hunter, SuperBrawl RPG
Price: $ 1.06 - $105.69
Wuxuush Hunt iyo dhigaan aan ilaalinayna. Waxaad tahay ugaadhsadaha uga mas'uulka ah, kuwaas oo uu leeyahay xirfado badan oo kala duwan, sida ku ugaarsadaha kale mas'uulka in kulankaan. Waxaad xuubsiiban karo 1 ama 3 star masuulka ka ah, iyaga sidoo cusboonaynta sida soo jiidashada ilaa iyo kor u xoog.
28. She'ool Empire
Price: $ 3.57 - $124.71
Kulan xarrakada Crime. Tani waa, kulanka ugu weyn ugu daran dembi halkaas ayaad u keentay, boqortooyadiisa aad u buuxiso xukunka. Samee daacad la Mafia, burcadda waddooyinka iyo madaxda danbi. Xataa waxaad soo dejin karo ciyaartoy kale oo nool, sida aad ka soo kici soo baxay si uu ugu danbeyn noqday buuga ah!
Price: $ 2.33- $ 108.98
Raacdeeya warkiisiina model ah sida. Shaqee sidii heesaa, caan ah ciyaaraha iyo qoob u doonaya in ay noqdaan caan. Waxaad noqon kartaa boqoradda baraf qurux soo socda, oo aad u awoodin inay kacaan in xaaladda caan ah. La kulan dad cusub oo joog la caanka ah ee kale.
30. My New dhashay Baby Sister
Price: $ 1.09 - $ 5.45
Ku biir aad hooyaday uurka. Iyada caawi adigoo siinaya badan oo jacayl iyada, sida aad u caawin qurxin xanaanada iyo labistaan ​​walaashaa cusub dhashay ilaa. Sii hooyada ultrasound ah, oo maalkeedana wuu boobi doonaa. Waxaa jira 8 hawlo aad u samayn oo markay kuu dhashay iyada tuuri kartaa xisbi.
Waxaad tahay dukaan ku maamula koox halyeeyo iyo crafters. Waxaad soo diri doonaa geesiyaal ka soo on balaadhan halkaas oo ay ku yeelan doonaan si ay ula dagaalamaan Col ururiyaan qalabka. Crafters ayaa markaa kadib qaadan qalabka kuwa oo la abuuro oo hubkiisa iyo hub. Waxaad baayacmushtarka ku socotay ah waa Taliyaha aad domain.
32. Kritika: Knights White ayaa
Price: $ 1.23 - $124.79
Dagaal ciyaarta RPG. Waxaa jira kooxda heysata badan iyo mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay leedahay gaarka ah ee xirfadaha. Waxaa jira ruxruxo aan dhammaadka lahayn ee wuxuush, sidoo kale waxaa jira xayawaanka in ay si aad kooxda iyo inuu kugu caawiyo noqday xoog. Guulaysi ee Tower Dhibaatada iyo 65 dabaq ah. Dunida tababaraha jiraan madaxda awood badan in aad u baahan tahay si ay u jabiyaan.
33. Rise mugdiga
Price: $ 6.06 - $121.45
Bedelaan shan fiends kala duwan. Faaruqiyeen Battle iyo madaxda in Story Mode. La dagaallama ciyaartoyda kale ee ka socda caalamka ee Soul haddana goosta, oo Arena, iyo soo celinta nidaamka iyo nabad madarad oo dhiig ah oo ka dhici doona awood fiends oo ku shaabadeeya. Haddii aad qaadato in ka badan baraf aad unseal karaan awooda oo waxaan ka dhigi aad sameyso qayb gala.
34. Dark jinniyada
Price: $ 1.24 - $109.12
Waxaad inaan dunida badbaadiyo. By adkaadeen sayidkii jinnigii ayaa loogu yeeray awoodda dahsoon. Ka qaad, oo boqornimadiisa oo ka joojinaysaa xakameeyo adduunka. By isaga dagaalka hub halyeeyga aad miiqan meesha aad ku kici karaan kor ku xusan tartanka.
Price: $ 1.09 - $65.04
Chat oo u dukaameystaan ​​saaxiibada. Chat saaxiibada, galaan tartamada, heli qaababka gaar ah iyo noqdo qof caan ah. Hel tiilmaamaya la yaab leh oo makeovers, oo ay kula ciyaaraan 300 milyan oo dadka kale ee jecel timaha iyo fashion sida ugu badan ee aad samayn.
36. seegtayd tattoo Artist Secret salon
Samee tattoos kuu gaar ah. Iyaga samaynta iyo ka dibna u codsan, sida aad u heli in aad la kulanto waxa tattoo fiirin doonaa sida. Waxaad haysan doontaa 15 macaamiisha kuwaas oo ay ku dalbanayso iyo in aad sidoo kale leedahay 50 + tattoos inuu u ciyaaro agagaarka leh. Kulankaan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah rinjiyeynta wajiga iyo hab tiradda in uu yahay gaar ah.
37. Ma-u jeclaada? Gabriel - Otome
Price: $ 1.54 - $77.94
Baaqaya, ciyaarta. Waxaad adigu iskaa u helay shaqo oo uu jiro nin halkaas oo uu leeyahay sumcad sida lover caadaystay. Haddaba sidaas daraaddeed in aad go'aansato sida aad rabto in aad sheekada si ay u tagaan, waxa aad awoodi kartaa in ay saamayn ku yeeshaan iyo go'aan ka gaarto waxa natiijada ugu dambeeyana uu noqon doono.
Ka caawi pug noqonaysaa xiddig. Stroke inuu calooshiisa iyo in la hubiyo taageerayaasha lahaan ciyaar weyn.
39. Da'da dagaalamaya Empire
Price: $ 0.99- $ 132.28
Kulan A dagaalyahan. Taasi waxaa ku jira RPG ah in weligeed laguma arag ka hor kulan noocan ah. Dagaal Tactical la animations dagaal cajiib ah. Dhis iyo boqortooyadiisa oo laga adkaado cadaawayaashaada oo dhan. Ku biir isbahaysi oo cadaawayaashiinna weeraraan.
Price: $ 1.54 - $7.78
Baro makaanikada xujo. Waxaad tahay geesi ah oo aad u baahan tahay si ay ula dagaalamaan wuxuush si aad noqon kartaa braver, xoog iyo xigmad badiya. Waxaa jira xujooyinka iyo meelaha ay ku sahamiyaan, sida aad aragto qarsoon in Aventana leeyahay in ay bixiyaan.
41. Jewel waxdhace
Ka caawi stickman in ay ka xadaan. Waxaa jira dheemman Rafaa ee matxafka iyo aad u baahan tahay si ay u caawiyaan stickman in ay ka xadaan iyo cararo. Ku caawi in ay helaan waddo ammaan ah si aad u hesho ka mid ah matxafka.
42. Final Fantasy Record Goolhaye
Price: $ 1.24 - $106.99
Kaag daqiiqado aad ugu jeceshahay. La dagaallama aad dhex daqiiqado classic ah khiyaali final, caawin si loo soo celiyo xasuus lumay oo ay dunida oo mar kale badbaadiyo. Samee kooxda u gaar ah oo ay galaan dagaalka oo aad xakamayn kartid socodka.
U samaynta guriga riyo adiga kuu gaar ah. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u kiciyaan aad alaabta u gaar ah, astaysto aad wallpaper iyo dabaqa. U samaynta qol kasta ee gurigaaga, sida aad u kiciyaan guriga riyo aad 3D. Xataa waxaad kordhin kartaa qiimaha gurigaaga ay ku wada dhammaaday shuqulkii aan sidaa yeelno, waxa uu.
Baro saabsan jacaylka iyo hindiga. Baro wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan jacaylka, jaceyl iyo hindiga. La kulan guys iyo gabdhaha ugu kulul, rumowday iyaga la xitaa jabsada iyaga la. Kulankaan ayaa kaa dhigi doonaa khabiir jacayl ah oo waxaan idin barayaa wax walba oo aad u baahan doontaa in la ogaado oo ku saabsan soo dhacaya in jacaylka.
45. Dragon Saciiro
Soo qaado dagaalka in ay joojiyaan. Tani waa ciyaar sheeko, halkaas oo aad u baahan tahay si ay u tagaan Safar ah in ay kaa caawiyaan in aad cadaawayaashiinna adkaadeen. Waxaad weeraraan karaa madaxda in waqtiga dhabta ah, uga hortagaan ciyaartoyda kale ee saaxadda, oo la dirir cadaawayaashooda aad soo gaarto in midii ugu.
46. ​​Princess Dawaarka Olimpico
Samee naqshado dharka. Waxaad tahay dawaarle boqornimo, kuwaas oo uu leeyahay in la abuuro naqshado u amiirad ah. Waxaad ku dari doona oo kulan midabo leh xirfadaha aad u leeyihiin in ay soo saaraan dharka quruxda badan ee sida. Amiirad ayaa cayaari doonaa garoonka kubada oo ah amiirka waxaa ahaan doonaa inuu arko, in dharka ugu qurux badan in aad ku abuuri doono iyada.
Hel geesiyaal si ay ula dagaalamaan kasta oo kale. Waxaad heli doontaa inaan dunida badbaadiyo fowdada. Waxaad heli doontaa si ay u sameeyaan koox ka mid ah lix characters sida aad dagaal iyo farganka weerar kasta oo geesiyaal ah. Geesigii kasta wuxuu leeyahay xirfad gaar ah oo aad u baahan doontaa inaad isticmaasho si ay u jabiyaan cadowga.
48. Xiddiga Life
Tus aad style fashion u gaar ah. Samee fashion, ciyaaro saaxiibadaa, labistaan ​​ilaa iyo samayn ku qurxiyo iyo timaha oo aad avatar. Raadi jacayl caan ah oo ay ka baxday taariikhda ah; xitaa gacantaada isku day at shaqooyinka kala duwan. Naftaada kool-koolin laga fulinyo iyo aad u hesho kaaliyaha fashion aad u gaarka ah.
49. My Dhashay - Ani Care Baby
Ka caawi hooyo iyada oo loo marayo uurka. Sii ilmaheeda qubeyska, iyada lagu quudiyo oo iyada u labistaan ​​ilaa. Kool-koolin aad hooyada iyo ilmaha cusub, iyagoo u midoobay ilmaha ka dhisan qurux badan oo ay leeyihiin xiiso leh hawlaha aad iyo hooyaday ma samayn karo.
La dagaallama jasiiradda sabayn oo cirka jooga. Wax kasta oo aad samayn aad u baahan doontaa inay hesho. Sidaas aad ku sawirnaa inuu la diriro, tuubada si ay u jabiyaan Cadawgiinna, ka jaftaa inuu shaqaalayaal u kireeyo dadka kale iwm Baro xirfadaha iyo sixir, aad xitaa yeelan doonaan in ay ka jaftaa u kordhiso awoodaada.
> Resource > Emulator > Top 50 Android RPG Games